Çambaşı Bandhigga Barafka ayaa bilaabmaya Axadda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Çambaşı Bandhigga Barafka ayaa bilaabmaya Axadda
22 / 01 / 2020 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
Bandhigga barafka ee cambasi wuxuu bilaabmaa maalin sabti ah
Sannad-guuradii 15-aad ee Bandhigga Barafka ee 'şıambaşı', oo lagu qabtay heldambaşı Plateau, oo ah mid ka mid ah xarumaha dalxiiska ee loogu jecel yahay Ordu, ayaa la qabtaa sannadkan. Bandhigga, oo si joogto ah loo qabto sannad kasta oo noqda mid dhaqameed ah, wuxuu bilaabmi doonaa Axadda, Janaayo 26, 2020, saacaddu markay tahay 10.00:XNUMX.
WAA INUU FASAL AHAAN
Waxaa soo abaabulay Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu iyo Dowlada Hoose ee Kabadüz, 15-ka Çambaşı ee dabbaaldegga Barafka ayaa martigelin doona sawirro midabo leh oo munaasabado badan la qaban doono. Bandhigga, tartamada barafka hiwaayadda ah iyo tartamada barafka ayaa la qaban doonaa. Yaxya Altun iyo Yılmaz Kaptan ayaa ku bixin doona riwaayad xaflad ah, halkaas oo sidoo kale ay ku qaban doonto kooxda Magaalada Ordu Metropolitan City Orchestra. Intaas waxaa sii dheer, daaweynta maxalliga ah ayaa loo fidin doonaa muwaadiniinta taagan furiinka ee laga furi doono goobta xafladaha lagu qaban doono tartamo kala duwan.
“DHAMMAAN NADAANADAADA WAA KU SAMEEYSA FARSAMADA”
Isagoo caddeeyay in Çambaşı Plateau ay noqotay mid ka mid ah sumadaha dalxiiska ee Ordu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Mertmet Dr. Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, “Xarunta Çambaşı Ski Center oo leh 2000 oo qofood ayaa noqotay mid ka mid ah xarumaha soo jiidashada dalxiiska jiilaalka. Annaga oo ah Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu, waxaan si aad ah uga shaqeyneynaa si aan u helno oo aan u aragno qurxinta magaaladeena waxbadan. Dalxiiska magaaladeena hadda waa 3 bilood, ma ahan 12 bilood. Macnaha guud, waxaan ku casuumay dhammaan muwaadiniintayada kaleba munaasabada toambaşı Snow Festival, oo aan abaabuli doonno markii 15aad. ”
QIIMAYNTA XIRIIRKA CAAWINAADA
Dhinaca kale, kulan ayaa lagu qabtay isuduwidda Isuduwaha Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu Cali Erdal Gülderen iyo Duqa Magaalada Kabadüz Yener Kaya oo ku saabsan 15-ka dabbaaldegga Barafka ee Çambaşı. Intii kulanku socday ayaa waxaa laga wada hadlay arimihii laxiriira gaadiidkii muwaadiniinta ee kaqeyb gali doona xaflada iyo daraasadaha lagu sameyn doono garoonka.
Codsiga hal-mar ee aqalka lacagta wuxuu bilaabmaa Axadda